एक दिनमै बन्छ यति राम्रो घर-गोठ ! पत्याउनु भएन ? भिडियो हेरेपछि नपत्याएर सुखै हुन्न, ६ लाखमा चार कोठे घर – Tufan Media News
एक दिनमै बन्छ यति राम्रो घर-गोठ ! पत्याउनु भएन ? भिडियो हेरेपछि नपत्याएर सुखै हुन्न, ६ लाखमा चार कोठे घर
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार १६:३९
राजेश रुम्बा लामाको चितवनमा तामाङ ब्लक उद्योग संचालित छ । उनको तामाङ ब्लक उद्योग पुर्वी चिवनमा निकै चर्चित छ । राजेशले संचालन गरेको उद्योगले एकदिनमै घर गोठ निर्माण गरेर घरधनीलाई हस्तान्तरण समेत गर्ने गरेको छ ।